Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny frizôna Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny frizôna
Amin'ny teny frantsay, ny matoanteny créer dia midika hoe "mamorona." Raha tianao ny manova izany amin'ny sehatra hafa toy ny "noforonina" na "mamorona, dia mila mampifanaraka azy io ianao. Ny vaovao tsara dia ity iray ity dia tsotra ary mitovy amin'ny ankamaroan'ny matoanteny frantsay.
Mpamaritra amin'ny teny esperanto Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny esperanto
Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny frantsay Izany dia satria tsy maintsy manova ny matoanteny mamaritra ny mifanaraka amin'ny voambolana voafantina sy ny teboka tadiavina.
Mety ho aretin'andoha ho an'ny mpianatra Frantsay izany, kanefa lasa mora kokoa amin'ny matoanteny vaovao hianaranao izany.
Créer dia matoanteny -ER amin'ny teny mandika ary manaraka karazana fampifangaroana mahazatra. Miangavy tsotra fotsiny ilay mpahay siansa miaraka amin'ny fepetra mifanentana amin'ny sazinao. Ohatra, "Izaho no mamorona" dia " je crée " ary "hamorona" isika dia " nous créerons ." Ny fampiharana izany amin'ny teny manodidina azy dia hanampy amin'ny fahatsiarovana.
Zavatra tsy ampy / fanononana X - SAMPA tsy ampy amin'ny teny krôasiana
Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto
Ny Participle Past sy Passé Composé
Ny fomba mahazatra hanehoana ny fihetsika taloha "noforonina" amin'ny teny frantsay dia amin'ny pasté composé . Mba hanamboarana an'io dia manomboka amin'ny voambolana voambolana ary ny dika mitovy amin'ny matoanteny matoanteny fanampiny .
Avy eo, ampio ny past participle créé .
Ohatra, ny "Izaho no namorona" dia " j'ai créé " ary "nohariana izahay" dia " nous avons créé ." Mariho hoe ahoana ny ai sy avons dia ny konjugates of avoir ary tsy miova ny past participle.
More Conjugations Créer simple
Toy izany koa, ny fitakiana dia midika fa mety tsy hitranga raha tsy misy zavatra hafa koa. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza
Na dia mety tsy hampiasa ireo endriny rehetra ireo aza ianao, dia zava-dehibe ny fahalalana farafaharatsiny momba azy ireo.
Crée créerait CREA créât
créiez créeriez mamorona créassiez
Ny teny hoe créer amin'ny endrika tsy mety dia matoanteny mora. Tazomy ireo zavatra fohy sy mamy noho ireo fehezan-teny mampikorontana ireo ary tsidiho ny mpisolo tena. Raha tokony hoe " tu crée ", aza mampiasa " crée " irery.
Mampiasa ny 'Como' amin'ny teny Espaniôla
Ny Malgrage Que 'Ny Fiteny Frantsay?
Fantaro ny fomba fampiasana ny ankehitriny
Famaritana tsy ampy amin'ny fiteny malagasy Ohatra tsy ampy amin'ny teny malagasy Pejy ahitana dikan-teny Meny fitetezana Fitaovana manokana Hamorona kaonty Hiditra Valam-pejy
Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny japoney
Fomba fiteny amin'ny teny espaniola
Ahoana ny fampiasana 'Estar' amin'ny teny Espaniôla
All About Chercher - Nohazavaina ny matoanteny frantsay
Eo anoloana - Manohitra
'Haber': Ankehitriny dia misy Verb!
Inona no atao hoe Music Music?
Tena Ilaina ve ny Voodoo Doll?
Inona moa ny rafi-panavotan'i ABT?
Ahoana no hanoratako ny 'The Simpsons' na Matt Groening?
Ahoana ny famakiana manga tsy hivoatra
Manomboha amin'ny tenanao manokana
Inona no Drafitry ny Famonjena An'Andriamanitra?
Lozan-tany Labia sy Stories Lab
Inona no atao hoe tetik'asa?
Mahita Ny Volana Madiodan'ny Ramadany ve ny Ankizy Silamo?
Fandresen-dahatra ny T
Ireo vehivavy tao amin'ny Torah dia mpiara-manorina ny Isiraely
Ahoana ny fandidiana ny tavoahangin-tseranana ao anaty tirozy
Iza moa ny Manchu?
Ady amin'ny Iraq: ny zavatra rehetra tadiavinao (ary mila)
Tantaran'ny tantely tantely sy ny fitantanana ny olona ao amin'ny Apis mellifera
Rahoviana ve ny Mardi Gras?
Fikarohana am-polony taona lasa izay no manambara amintsika ny safidy ataon'ny sekoly
Teny nalaina avy amin'ny sarimihetsika "Borat"
Ahoana ny fampiasana cricket mba hampihenana ny elanelana
Inona no dikan'ny "kana" amin'ny faran'ny sazy amin'ny teny Japoney?
Ady faharoa (218 - 201)
Ahoana ny fandefasana ampifandraisina amin'ny Database Access
Fandefasana baolina amin'ny The Masters Tournament